Fanasana faha-10 taona Fpma Avignon - 4 jona 2017
ACCUEILLA FPMAHISTORIQUE DE LA FPMASA CONFESSION DE FOISTRUCTURE DE LA FPMALE BUREAU CENTRALLES SECTIONS LA PASTORALEVIE SPIRITUELLEPREDICATIONSPERICOPE 2017Liturgie FPMAENSEIGNEMENTSRADIOAGENDA 2017PROJET PASTEURS SALARIES	« Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoana anareo ho tena iray. » Kolosiana 3 : 15
Ho an’ny vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny FPMA ,
Ampandalovina amin’ny Biraon’ny Faritany Atsimo Atsinanana
Ary ny Filohan’ny FPMA , Pasteur RAVALITERA Jean sy ny mpiara-miasa aminy rehetra,
Ry Hava-malala ao amin’ny Tompo, Havaozina sy hampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana hombam-piadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo.
Endrey tokoa ny fitahiana sy ny fitantanana azo avy amin’Ilay Ray be fitia ka nahatratra ny faha-folo taona niorenany ny Tafo Avignon. Mikasa ny hankalaza izany ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, ka ho fanokafana izany dia manasa anareo amin’ny :
· Fotoampivavahana fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny Alahady 4 Jona 2017 amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny Eglise Adventiste ; 5, rue Madame de Sévigné 84000 AVIGNON
· Fiaraha-misakafo am-pirahalahiana « Agape » aorian’ny fotoampivavahana ao amin’io toerana io ihany.
· Fitsangatsanganana iraisana ahitana lalao maro samihafa ny Alatsinainy 5 Jona 2017. Ny toerana mbola holazaina amin’ny manaraka.
Tena fanirianay fatratra ny fahatongavanareo hanotrona anay amin’izany fotoana rehetra izany, indrindra moa ny fitrotronareo am-bavaka mba ho eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no hanatontosana izany fanokafana ny fankalazana izany. Hankasitrahanay ny fandefasanareo ny anaran’ireo izay manam-paniriana ny ho avy hanotrona anay mba hanaovana ny fandaminana.
Manonona am-pitiavana ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo
Ho an’Ilay Mpahary sy Mpamonjy antsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy anie ny voninahitra ambony indrindra. Amin’ny anaran’ny Komitin’ny tafo sy ny vahoakan’Andriamanitra FPMA Avignon.
Ny Mpitandrina Ny Filoha
Pst Christian RANDRIA Tefisoa RANDRIANARIVONY
CONCERT SZM - 27 MEY	FPMA-Bordeaux - Concert Evangélique	Fifaninanana “logo” faha-10 taona Radio Vatsy FP	FETIM-PIANGONANA TAFO ORLEANS - 20 Mey 2017	Fanasana faha-10 taona Fpma Avignon - 4 jona 2017	Conférence F Clavairoly - M Kubler - 18 avril	Le Film STK Paris " Une foi en route "	Fivahinianana Tany Masina 2017 - 15-22 novambra 2017	Présence Protestante - DÉCOUVRIR LA BIBLE en 2017	Eglise Protestante Malgache en France - Fiangonana Protestanta Malagasy Aty AndafySiège National: Maison du Protestantisme 47, rue de Clichy 75009 Paris